Da koro bi, Kweku Ananse kɔr Nyame hɔ kɔbɔɔ ne hwen kyerɛɛ no sɛ ne yere nnyɛ nipa papa biara sɛ ɔno de eduane ara na ɔdi.. Ɔsan kaa sɛ ne yere no di ɔno Ananse koraa mpo ne ediban. Nyame bisaa Ananse, ‘Dɛn na wo pɛ sɛ me yɛ fa asɛm yi ho?’
Ananse yii ano kaa sɛ, ‘Nyame, me srɛ wo ma me yere a ɔnni ano wɔ n’enim.’
Nyame bɔɔ hu kakra na ɔhwɛɛ Ananse. Nna Ananse ne ho yɛ Nyame enika efiri sɛ abere biara ɔba bɛka nsɛm anaa nhyehyɛe a ɔpɛsɛ ɔyɛ a a ɛyɛ nwanwa kakra.
Nyame kaa sɛ ‘Yoo.’ ‘Anapa bɛbɛ no, me bɛ ma wo yere foforo a onni ano wɔ n’enim.’
Anansi eni gyee ara ma ɔkɔɔ gua mu kɔtɔɔ bayer ne borɛde a ɔbɛdi no kyena. Ananse enibere ni n’adwen ara ne sɛ, ‘Afa. Ediban no nyinara a me bɛtɔ no, me nko ara na me bɛdi!’
%smartmod-storyvideo-web version the new wife%
Nda kakra twaa mu na nna biribiara rekɔ so yie… kɔpem bere a Ananse kɔhwɛɛ edibannoa ndeɛma a wɔwɔ gyaade hɔ. Nna ɛyɛ papa eniberni yi hu kakra sɛ nna ediban no nyinara ayera. Nna Ananse nim sɛ ɔtumi bɔ ne ho mbɔden didi ara yie, naaso ɔnoara na nna wɔedi mo mbag anan, bayer nsia, borɛde baasa wɔ bere tiawa yi mu anaa? Nna asɛm no yɛ no nwanwa paa efiri sɛ nna onim sɛ ɔno nko ara na ɔredi ediban no nyinara, nka nka ara sɛ ne yere foforo no nni ano mpo a ɔde bɛdidi.
Nti Ananse yɛɛ n’adwen sɛ ɔbɛyɛ nhwehwɛmu. Ɔde n’ani kɔɔ gyaade ne ho yie ndapɛn kakra a wɔbɛba no mu. Ɔhwɛe hwɛe, naaso ɔennhu biribiara a ɛbɔ hu wɔ kwan biara so. Ne yere no noaa ediban maa ɔno ara nko. Nna Ananse nnte ase koraa siantiri a ɛwɔ sɛ ɔtɔ ediban mbɔho mienu dapɛn biara mu. Nna ediban no nyinara rekɔ hen?
Nna Ananse nim sɛ ɔpɛ ne yere n’eduanenoa, naaso ana ɔbɛtumi edi ediban bebree wɔ bere ketewa mu?
A Nna Anansi nngye nea ɔde n’eni rehu nti ɔgyinaa hɔ dii wɔ gyaade pono ne nkyɛn. Nna ne yere foforo no te egua so wɔ hɔ. Na nna ɔredidi wɔ kyɛnsee kɛse bi mu! Ɔde hu hwɛɛ sɛnea ne yere no faa bayer ne mo a wɔanoa na ɔde hyɛɛ n’ano a ɛtɛw n’amotoa mu!
Ananse bɔ hu ara yie sɛ ɔde n’ani rehwɛ biribi ti sɛ yi. Ma na ɔredwen ara ne sɛ, ‘Nti ha na m’ediban no nyinara kɔ. Me yere wɔ kokoa mu ano wɔ n’amotoa mu a ɔde wia ediban anadwo! Asɛm paa ni!’
Ewia pue ara pɛ, Anansi de ne yere no san kɔɔ Nyame hɔ kɔbisaa no siantiri a ne yere no wɔ ano a wɔde esie n’amotoa mu.
Nyame yii no ano, ‘Wo bisaa sɛ wo pɛ yere a “ɔnni ano wɔ n’enim.” Nti me maa wo yere a ɔwɔ ano wɔ n’amotoa mu. Wo emmbisa sɛ wo mmpɛ yere a onni ano koraa.’
Nna ɛyɛ Ananse sɛ Nyame egu n’enim ase na wɔadaadaa no, naaso Nyame ennhu papa enibere ni yi mbɔbɔr koraa. Nyame kaa kyerɛɛ no, ‘Nna wo wɔ yere a ɔdɔ wo na ɔsom wo yie, Ananse. Naaso wo enibere bɔne ne pɛsɛmenkominya nti, wo dween ho sɛ wo de wo nyansa bɛgye yere foforo efiri me hɔ. Me rekyerɛ wo sɛ me nim nyansa kyɛn wo koraa, na me gyedi sɛ wo enya adesuadehunu bi efiri asɛm yi mu. Enibere ne pɛsɛmenkominya nni tebea biara wɔ abrabɔ mu.’
Ananse n’eni toee sɛ ɔwɔ enibere na ɔsrɛɛ Nyame sɛ ɔmfa ne yere dadaw no nnsan mmbrɛ no efiri sɛ nna wɔesua nyansa paa. Saa da rekɔ no, Ananse si n’adwen pi sɛ ɔbɛyɛ nipa papa na ɔrennyɛ pɛsɛmenkominya. Na woana nim, ebi koraa mpo a ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkyɛ ne ediban?